Akụkọ - Ihe ngosi YUYAO 2018-2019
Ihe ngosi YUYAO 2018-2019
CHINA (YUYAO) International Plastic Expo 2018 & 20Nke China Plastic Expo na CHINA (YUYAO) International Plastic Expo 2019 & The 21Nke China Plastic Expo nọ na Ningbo Yuyao China Plastics City International Exhibition Center.
Ihe ngosi a dọtara ihe karịrị ndị ahịa dị irè dị 29,000 ma nweta ngụkọta ego nke yuan ijeri 3.9.
Ihe ngosi a nwere ebe ngosi ihe ruru 70,000 square mita, ụlọ ntu 3,400 na ebe ngosi ise, gụnyere ihe eji arụ plastik, igwe plastik, ngwaọrụ igwe, ngwaahịa plastik (obere ngwa ụlọ) na robots nwere ọgụgụ isi. Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ 707 sitere na ụlọ na nke esenidụt esonyewo na expo
Ngosipụta ahụ gosipụtara ụbọchị atọ wee meghee ụlọ ngosi ihe ngosi anọ nke ime ụlọ (4 # - 6 # - 8 # - Hall Hall) nke China Plastics International Convention and Exhibition Center. Ihe ngosi a lekwasịrị anya na igwe ihe eji egbu ihe, ihe eji eme ihe igwe, mpempe akwụkwọ na ihe eji arụ ọrụ, igwe eletriki na ngwa ọrụ ntanetị pụrụ iche, ịkpụzi ihe na nhazi, ihe ebu na ihe mgbakwunye 3D, ngwa ngwa na teknụzụ, ụlọ ọrụ na azụmahịa. akụrụngwa Ihe ọgụgụ na teknụzụ nwere ọgụgụ isi na akụrụngwa, ngwa ọrụ akụrụngwa, wdg.
The ngosi Aims iji mee ka ndị ọhụrụ ọnwụ ihu technology na akụrụngwa na n'ichepụta ụlọ ọrụ na Yuyao ebe, na-enyere ụlọ ọrụ na ulo oru ọhụrụ na mmepụta technology upgrading, ka mma ahịa competitiveness na ewu ewu na nke ụlọ ọrụ.
Kwa afọ, ụlọ ọrụ anyị ga-ewe otu mgbidi plastic pipe extrusion akara isonye na ule ma na-amị plastic ọkpọkọ na saịtị. E wezụga nke ahụ, ihe ngosi dị iche iche nke igwe anyị na-ewere dịkwa iche, nke na-adọta ọtụtụ ndị ahịa ịlele ma chọọ ịmata nkọwa na saịtị ahụ. Ndị ahịa ole na ole kwenyere ileta ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nye iwu na saịtị. Oge obula anyi juru anya, nwee obi uto na obi ekele.